Maxaa Shalay Ku Dhacay Cirbixiyeenkan Hawada Jooga? | Xaqiiqonews
Maxaa Shalay Ku Dhacay Cirbixiyeenkan Hawada Jooga?
Sheekadan Ayaa Dhacday Jimcadii la soo dhaafay ka dib markii labo cirbixiyeen Mareykan ah ay isku dayeen in hagaajiyaan bitiriga boostajada ay joogeen.
Markii ay dibadda uga baxeen qolka hawada la cadaadiyey ka sameysan, Cassidy oo ka mid ahaa cirbixiyeenada ayaa sheegay in ay ka luntay “muraayad yar”, oo ka mid aheyd kuwa cirbixiyeenada ay u isticmaalaan in ay ka caawiso aqriska shaashadaha.
Muraayada ayaa ka dhacday, muraayada ayaana hawada ku biibtay xaawaaro lagu qiyaasay 1 km/saacadii
Sida Xaqiiqonews ay ka soo xigatay webseeka arimaha hawada ka faalooda ee Spaceflight now, muraayada ayaa culeyskeedu ahaa 10 garaam, lumintaakeedana wax qatar ah kuma keenaayo cirbixiyeenada.
Goobta cirbixiyeenadani ay ku suganyihiin oo lagu magacaacbo “boosteejada hawada ee caalamiga ah”, waxaa Cassidy ku wehliya laba cirbixiyeen kale oo Mareykan ah Robert Pinkin iyo Douglas Hurley, sidoo kale waxaa halkaasi jooga labo cirbixiyeen Ruush ah Anatoly Evanshin iyo Evan Wagner.